के प्रेमको पनि जात हुन्छ र ? प्रेम गरेर विवाह गरे,छोरो पनि जन्माए,अहिले दलित भनेर श्रीमानले छो डेर हि डे (भिडियो हेर्नुस्) -
Home News के प्रेमको पनि जात हुन्छ र ? प्रेम गरेर विवाह गरे,छोरो पनि...
झापा जिल्लाको राजगढकि अम्बिका दर्जी काठमाडौमा दिदिसगैँ बस्दै आएकी थिइन । दिदिसगँ बस्ने क्रममामा दिदी बसेको घरबेटिका आफन्त रत्नमान श्रेष्ठसगँ उनको चिनजान भयो ।
रत्नमान अम्बिकक बसेको घरका घरबेटिका आफन्त भएको कारण उनी त्यहाँ प्राय आउने जाने गर्ने गर्दथे । त्यसरी आउने जाने क्रममा चिनजान भएका उनिहरु बिस्तारै एक अर्कासगँ प्रेम सम्बन्धमा रहन थाले । करिव ३ वर्ष अघि उनिहरुले प्रेम बिबाह गरि काठमाडौमै कोठा लिएर बस्न थालेको अम्बिकाले बताईन
रत्नमानको घर काठमाडौको माकबारी नै भएता पनि अन्तरजातीय बिबाह गरेकक कारण उनको परिवारसगँ बोलचाल भएन । त्यसैले उनिहरु फाल्टै बस्दै आएका थिए । बिबाह पछि मजदुरी काम गर्दै आएका रत्नमान र अम्बिकाको सम्बन्ध राम्रोसगैँ बित्यो ।
तर गत लकडाउन देखि भने आफुहरुको सम्बन्ध बिगरिएको अम्बिकाले बताएकी छिन । प्रेम बिबाह गरेर बसेका उनिहरु अहिले सम्बन्ध बिच्छेदको स्थितिमा पुगेका छन । अम्बिकाका अनुसार अहिले आफुलाई श्रीमानले छोडेर गएको बताउछिन ।
Previous articleपशुपतिनाथको दर्शन गरि आज मंसिर १० गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Next articleकठै !घर जग्गा राखेर श्रीमान विदेश गए,अहिले उतै स्त्रीसंग मोज गर्दा घर नै बिर्सिए (भिडियो हेर्नुस्)